झापा ३ मा राजेन्द्र २५,३७० मतले अगाडि, वसन्तको १२,३९० र पूर्णसिंहको १२,९८० मतान्तर
बडादशैँ पर्व आजदेखि समापन, साँझ सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको पूजाआराधना गरी रातभर जाग्राम बसेर मनाइदैं
इटाली आउँदो वर्ष हुने युरोकप फुटबलमा स्थान बनाउन सफल
मुसलधारे वर्षासहितको आँधीका कारण जापानमा पाँच जनाको मृत्यु
केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने राष्ट्रपति सीको घोषणा, ’भूपरिवेष्ठित नेपाललाई भूजडित तुल्याउन चीनले मद्दत गर्ने’
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको यसरी गरियो स्वागत तस्वीरहरु
चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई विमानस्थलमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा भव्य स्वागत
By radiovision on	 November 25, 2017 अर्थ-वाणिज्य, प्रमुख समाचार, राष्ट्रिय
गणेश पोखरेल ।
मंसिर २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जनमत कस्तो छ । निर्वाचनमा प्रचार तीब्र भइरहँदा हिजोको अवस्था के थियो र भोलि के होला भन्ने आम चासो छ । यो चासोलाई यहाँ सम्वोधन गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
जनमत परिवर्तनका लागि कम्तिमा ३ वर्ष लाग्ने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । त्यसैले विभिन्न संघसंस्थाका निर्वाचनको अवधि ३ वर्ष कायम गरिएको हो । झापाको ३ नम्वरमा रहेका स्थानीय तहका वडामा कुुन पार्टीका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले कति मत प्राप्त गरेका थिए भनेर यहाँ राख्ने र विश्लेषण गर्ने काम भएको छ । यो जनमतबाट कति के होला भनेर अनुमान लगाउन सहज हुनेछ ।
झापाको क्षेत्र नम्वर ३ मा २८ वटा वडा छन् । प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्वर ३ को प्रदेशसभा १ मा १४ वटा वडा छन् । कचनकवल गाउँपालिकाको ७ वटा र भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नम्वर १, २, ३, ४, ५, ६ र ८ रहेका छन् । यो क्षेत्रमा ५८,८१७ जना मतदाताले ७४ वटा मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ । क्षेत्र नम्वर ३ को प्रदेशसभा क्षेत्र नम्वर १ मा रहेका १४ वटा वडामा एक्लाएक्लै जोडदा एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले ८,६०२ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो । माओवादीका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले ५,७७६ मत प्राप्त गर्दा राप्रपाका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले ७,६९६ मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । कांग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले ९,६८४ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । एमाले, माओवादी र राप्रपाको गठबन्धनका पक्षमा २२,०६४ मत रहेको छ । यहाँ कांग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको मत घटाउँदा एमालेका उम्मेद्वार वसन्त बानियाँ १२३९० मतको अन्तरले अगाडि हुनुहुन्छ । यो क्षेत्रमा एउटा चर्चा प्रतिष्पर्धी उम्मेद्वारले चलाउने गरेका छन्, त्यो हो राजवंशीको भोट राजवंशीलाई खस्छ, तर उनीहरुले ५ महिना नहुँदै विर्सिएको तथ्य के हो भने राजवंशी थरकै उम्मेद्वारलाई अन्जार आलमले कचनकवलमा उपविजेता बनाउनु भएको हो । राजवंशी समुदाय जातिबाट माथि उठेर वर्गीय चेत विकास गरी सकेको समुदाय हो । ५ महिना अगाडि १२,३९० मतले पछि परेको पार्टीले ५ महिनापछि जनमत बदल्ने जादुको छडि चाहिँ के छ ? हिजो के थिएन र आज के प्राप्त भयो । यसर्थ मिथ्या हल्लाका पछि कुनै आधार छैन । एमाले उम्मेद्वार वानियाँ प्रतिष्पर्धाविहीन रुपमा अगाडि रहेको तथ्यले पुष्टि गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्वर ३ को प्रदेशसभा क्षेत्र नम्वर २ मा पनि १४ वटा नै वडा रहेका छन् । हल्दिवारी गाउँपालिकाको ५ वटा वडा, बाह्रदशी गाउँपालिकाको ७ वटा वडा, विर्तामोड नगरपालिकाको १० नम्वर वडा र भद्रपुर नगरपालिकाको ७ नम्वर वडा यो क्षेत्रमा छन् । यहाँको मतदाता संख्या ५५,७७१ रहेको छ । यी मतदाताले ७० वटा मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेछन् । यहाँका १४ वटा वडामा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले ११,६९४ मत प्राप्त गर्दा माओवादीका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले ४,६७७ मत र राप्रपाका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले ५,१८५ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो । एमाले, माओवादी र राप्रपाका वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मत जोड्दा २१,५५६ मत हुन आउँछ । यो क्षेत्रमा कांग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले ८,५७६ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । गठबन्धनको मतबाट कांग्रेसको मत घटाउँदा १२,९८० मतको मत अन्तर देखिन्छ । अर्थात्, माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार पूर्णसिंह राजवंशी १२,९८० मतले आफ्ना प्रतिष्पर्धीभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ । यो क्षेत्रमा पनि उम्मेद्वारबीच प्रतिष्पर्धा छैन भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र नम्वर ३ को कुरा गर्ने हो भने एमाले, माओवादी र राप्रपा गठबन्धनका उम्मेद्वार राजेन्द्र लिङदेन आफ्ना प्रतिष्पर्धीभन्दा २५,३७० मतले अगाडि हुनुहुन्छ । तथ्य यो हुँदा पनि प्रतिष्पर्धीहरु भन्छन्, हामी जित्छौं । आधार के हो जित्ने ? भन्न त सबै उम्मेद्वारले जित्छौं भन्नु स्वभाविक नै हो । तर, पार्टी, संगठन, समर्थक, शुभचिन्तकको सक्रियताले चुनावमा मत प्रभावित पार्ने र विजयी हुने हो । अहिले गठबन्धनका कार्यकर्ताले चुनावमा सक्रियता नदेखाउने हो भने आफ्नो राजनीतिक भविश्य कहाँ पुग्छ भन्ने बुझेका छैनन् र ? अनि विपक्षी मोर्चाका पार्टीका मान्छेले भोट दिएर जितिन्छ भन्ने सोच्नु भनेको मंसिरमा केटाकेटीले सिला खोजेको धानले भकारी भर्छौं भने जस्तै हो । भाकारी पाँजा उठाउनेले नै भर्ने हो सिला खोजेको धान मुठी माना हुँदै पाथीसम्म होला मुरी पुग्दैन । अनि सिला पनि एउटा समुहले खोज्ने अर्को समुह देखेको धान कुल्चिएर हिँड्ने हुँदैन, यो चुनाव हो ।
झापाको ३ नम्वरमा परेका पाँचवटा स्थानीयतह मध्ये २ वटा स्थानीय तहमा राप्रपाकै स्थानीय नेताले प्रमुख पदमा चुनाव जितेका छन् । वाँकी २ वटामा पनि राप्रपाको समर्थन राम्रै देखिएको स्थानमा एमालेका कार्यकर्ताले बसन्त वानियाँ र माओवादीका कार्यकर्ताले पूर्णसिंह राजवंशीलाई पनि जिताउनु छ । भनेपछि सौताका रिसले श्रीमानको काख फोहोर गर्ने कर्म एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताले गर्छन् भन्ने सोच्नु चुनावी प्रोपोगण्डा बाहेक केही होइन ।
सन्दर्भ लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पनि उठेको छ । राप्रपाका कार्यकर्तालाई भन्न अप्ठ्यारो हुनसक्छ । के मावापारिका राप्रपा गणतन्त्रबादी र मावावारिका राप्रपा राजावादी हुन् । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता टिकाउन कमल थापा खोज्दा उनी चाहिँ गणतन्त्रबादी राजेन्द्र लिङदेन चाहिँ राजावादी हुने कस्तो परिभाषा हो यो । श्रद्धेय केही शहिदको नाम लिएर चुनावमा भजाउन पनि खोजिँदैछ । जिल्ला विकासको सभापति भएका नाताले तत्कालिन आन्दोलनमा राजेन्द्र लिङदेनले एउटा पक्षको जिम्मा लिनुपर्छ भने गृहमन्त्री भएका कमल थापाको चाहिँ भाग लाग्दैन । लाग्छ भने मावापारि पुगेपछि पूर्व महामन्त्रीले के भन्नुहुन्छ, हामीलाई काहीँ पनि राप्रपाको भोट चाहिँदैन भन्न सक्नुहुन्छ ? अझ आन्दोलनमा हिस्सेदारिताको कुरा गर्ने हो भने कांग्रेसको आरोप अनुसार राजेन्द्रको भागमा ३ जना शहिद पर्नुभएछ । कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री हुँदा भएका शहिद ३०० (तीन सय) जना भन्दा बढी छन् कि छैनन् ? सिटौला गृहमन्त्री हुँदा गणतन्त्र मागेर आन्दोलन गर्ने माओवादी कार्यकर्ता कति जना शहिद भएका छन् ? गोली चलाउने आदेश गृहमन्त्रीले दिन्छ कि जिविस सभापतिले ? भ्रम फैलाउने पनि एउटा हद हुन्छ ।
हिजो को कुरा व्यक्तिगत रिसइवी होइन, त्यो राजनीतिक आन्दोलन हो । तर, भुमिकाका हिसावले राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको संलग्नताको कुरा गरेर वदनाम गर्ने हो भने सिटौला गृहमन्त्री हुँदा ज्यान गुमाउनेलाई सिटौलाले मारेका हुन भन्न र प्रचार गर्न अर्को पक्ष किन नलाग्ने ? त्यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, क्षेत्र नम्वर ३ मा राजेन्द्र लिङदेनले जितिसक्नु भो । पराजय स्वीकार गर्न प्रतिष्पर्धीलाई कठिन भइरहेको छ । एमाले र माओवादी कार्यकर्ताले पनि बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने रविन्द्र लिङदेनलाई जिताउन मत हाल्ने अनि अहिले पार्टीले निर्णय गरेरै राजेन्द्रलाई मत हाल्नु भन्दा कांग्रेसका पक्षमा कुरा गर्ने हो भने पार्टी पनि कांग्रेसमै लाग्न पाइन्छ । लागे हुन्छ । लोहोटाले पानी उभाएर समुन्द्रको सतह घट्दैन ।
बिर्तामोड नगरपालिकाका कृषि अधिकृत राजेन्द्र कडरियासँगको कुराकानीसहित
October 13, 2019 | 39 min 27 secs
भद्रपुर वडा नम्वर ८ का सचिव नेत्रप्रसाद पोखरेलसँगको कुराकानीसहित
October 9, 2019 | 30 min 27 secs
मेचीनगर नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य कृष्ण कनालसँगको कुराकानीसहित
October 8, 2019 | 39 min 15 secs
बाह्रदशी गाउँपालिका वडा नं ५ का अध्यक्ष भुपेन्द्र कटुवालसँगको कुराकानीसहित
October 8, 2019 | 36 min 27 secs